Mogadishu Journal » Ruushka ayaa ku guuldareystay inuu dib u dhigo mamnuucida ka qeybgalka Koobka Adduunka
Codsi ka yimid Ruushka oo ahaa in la hakiyo xayiraadda lagu soo rogay kooxahooda kubadda cagta tartamada FIFA ayaa waxaa diiday maxkamadda dhexdhexaadinta ciyaaraha ee CAS.
CAS ayaa ku dhawaaqday mid la mid ah Talaadadii oo ku saabsan tartamada UEFA, waxaana go'aankan ugu dambeeyay uu dhammaan xaqiijiyay in Russia aysan ka mid ahaan doonin Koobka Adduunka ee 2022 ee Qatar, iyadoo isreebreebkooda semi-finalka uu dhici doono Khamiista soo socota.
Ruushka ayaa ku ballansanaa inuu wajaho Poland, laakiin FIFA ayaa taas beddelkeeda u gacan gelisay dhiggooda inay macasalaameeyaan finalka ciyaartooda isreebreebka.
Poland waxay hadda la ciyaari doontaa Sweden ama Czech Republic - iyadoo semi-finalkaas 24-ka Maarso wali lagu wado inay sii socoto - booskeeda Qatar 2022.
Poland, Sweden iyo Czech Republic ayaa mid walba ku dhawaaqay inay diidi doonaan inay la ciyaaraan Ruushka, sababtoo ah dhacdooyinka ka socda Ukraine.
Xiriirka Kubadda Cagta Ruushka ayaa racfaan u gudbiyay CAS ka dib markii kooxahooda iyo xulkooda laga mamnuucay dhammaan tartamada FIFA iyo UEFA "ilaa amar dambe".
Go’aanka wadajirka ah ee FIFA iyo UEFA ayaa daba socday duulaankii Ruushka ee Ukraine saddex toddobaad ka hor.
Ruushku "si ba'an ayuu uga soo horjeestay" mamnuucista oo uu gudbiyay racfaan, isagoo sidoo kale raadinaya joogitaanka bilowga ah ee fulinta.
Si kastaba ha ahaatee, CAS waxa ay xaqiijisay Jimcihii in ay diiday codsigaas, iyada oo xaqiijisay in "Go'aanka Caqabadku uu weli sii jiro" inta ay socoto dacwadaha.
War saxaafadeed ka soo baxay CAS ayaa lagu yiri: “Gudoomiyaha Waaxda Xalinta Khilaafaadka Racfaanka ee Maxkamadda Xalinta Khilaafaadka Ciyaaraha ayaa ku gacan seyray codsigii ay soo gudbisay Xiriirka Kubadda Cagta Ruushka (FUR) ee ahaa in la sii joogo, inta ay socoto dacwada CAS, fulinta Go'aanka Golaha FIFA ee ah in dhammaan kooxaha iyo kooxaha Ruushka laga joojiyo ka qaybgalka tartamada ilaa ogeysiis dambe (Go'aanka Caqabadda leh).
“Sida la raacayo go’aanka la isku khilaafay waa uu sii socdaa, dhamaan kooxaha iyo kooxaha Ruushka ayaa sii wada in laga joojiyo ka qeyb galka tartamada FIFA. Waxaa sii socda dacwadii CAS ee dhex dhexaadinta, guddiga dhexdhexaadinta ayaa hadda la dhisayaa, dhinacyaduna waxay isweydaarsanayaan qoraalo, wax dhegeysi ah ma dhicin. weli la hagaajiyay."